သွေးတိုးခြင်းဟာ နှလုံးကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေတဲ့ အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာတလွှားမှာ လူပေါင်း တစ်ဘီလျံခန့်ကို ဒုက္ခပေးနေတဲ့ ရောဂါလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ထိရောက်စွာ မကုသခဲ့ရင် နှလုံးရောဂါ၊ လေဖြတ်ခြင်း စတဲ့အခြေအနေတွေ တွေ့ကြုံနိုင်ပါတယ်။ ကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ သွေးတိုးခြင်းကို သက်သာစေဖို့ လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ နေထိုင်မှုပုံစံတွေ ရှိနေပါတယ်။ ယခု ဆက်လက်ဖော်ပြမှာကတော့ သွေးတိုးပြဿနာကို ဘယ်လိုလျှော့ချနိုင်သလဲ ဆိုတာပါပဲ။ ၁။ ပုံမှန်လမ်းလျှောက်ပါ၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။ လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်းဟာ သွေးတိုးလျှော့ချနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတခု ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်ပေးခြင်းအားဖြင့် နှလုံးကို ပိုမိုသန်မာစေပြီး သွေးများကို ညှစ်ထုတ်ပေးရာမှာ ပိုမိုထိရောက်စေပါတယ်။ သုတေသနတွေအရ လမ်းလျှောက်ခြင်းကဲ့သို့ ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းမျိုးကို တပတ်မှာ ၁၅၀ မိနစ်၊ ပြေးုခြင်းကဲ့သို့ အားစိုက်ထုတ်ရတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းမျိုးကို တပတ် ၇၅ မိနစ်ခန့် ပုံမှန်ပြုလုပ်ပေးခြင်းဟာ သွေးပေါင်ချိန်ကို မှန်စေပြီး နှလုံးကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပြုတယ်လို့ […]
မြန်မာကား များများကြည့်တဲ့သူတွေဆို သိကြမယ့် ဇာတ်ကွက်တစ်ခုရှိပါတယ်။ သားသမီးတွေ မလိမ္မာတဲ့အခါ မိခင်ဖြစ်သူက သွေးတိုးဝေဒနာခံစားရပြီး အိပ်ယာထဲ ဘုံးဘုံးလဲတဲ့ ဇာတ်ကွက်မျိုးပေါ့။ ဒီလိုမြင်ကွင်းမျိုးကို လူတိုင်းနီးပါး ရုပ်ရှင်တွေ ဗီဒီယိုတွေထဲမှာ မြင်ဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။ သာမန်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့ ပေါတောတောနိုင်တယ်လို့ ထင်ရလောက်ပါတယ်။ မကြာခန မြင်ပါများလာတာကြောင့်ရော၊ နဂိုမူလအခံ ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်က အားနည်းတာကြောင့်ရောပေါ့။ ဒါပေမယ့် အထင်မသေးပါနဲ့၊ စိတ်ခံစားချက်ဟာ သွေးတိုးဝေဒနာကို အဆုံးအစွန်ကို ရောက်သွားအောင် တွန်းပို့နိုင်တယ်ဆိုတာက အမှန်တကယ်ပဲ? မြန်မာကားတွေထဲက ထိုးဇာတ် သက်သက်ပဲလား? သွေးတိုးတယ်ဆိုတာ ဘာလဲ ပြဿနာကို အဖြေမရှာခင်မှာ သွေးတိုးက ဘယ်လိုရောဂါမျိုးလဲဆိုတာကို အရင်နားလည်ထားဖို့ လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ သွေးတိုးဝေဒနာဟာ အဖြစ်များတဲ့ ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့ ကမ္ဘာ့လူဦးရေ ရဲ့ ၃၇% လောက်ဟာ အဆိုပါဝေဒနာ စွဲကပ်နေကြပါတယ်။ ရုတ်ရက်ဆိုရင်တော့ သွေးတိုးဟာ သာမန်ရောဂါတစ်ခုလို့ ထင်မှတ်မှားစရာရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သတိထားသင့်တာက ဒီဝေဒနာကြောင့် တစ်နှစ်ကို […]